Apple | November 2019
Ugu Weyn Ee Apple
Guryaha waxtarka leh iyo ka hortagga tufaaxa qalalan: goosashada iyo kaydinta
Qallajinta waa habka ugu fudud ee tufaaxa loo beero xilliga jiilaalka. Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada kiimikada taajirsan, tufaaxa qalajiya waxay leeyihiin waxyaabo badan oo bogsiinaya. Qalitaanka Apple waxaa si weyn loo isticmaalaa karinta: marka lagu daro compote aad u caan ah, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo pies, canjeelada, saladh, jelly, ku dar firiley iyo shaaha, iyo cuno cayriin.
Hababka ugu fiican ee tufaaxa loogu talagalay jiilaalka
Tufaaxyada barafka ah ee jiilaalka waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee aad uga dhigi karto cuntadaada jiilaalka faa'iido badan iyo hodan ku ah fiitamiinada. Iyadoo ay ugu wacan yihiin qiimaha hooseeya iyo fudaydinta goosashada, mirahaas waxaa si weyn loo isticmaalaa karinta. Hooyooyinka xayawaanku waxay og yihiin daraasiin ka sameysan tufaaxa barafaysan, taas oo ka faa'iideysan doonta jirka oo daciifay xilliga qaboobaha.
Raadi fur furan ee tufaaxa jiilaalka
Qaar badan oo naga mid ah, tufaaxa qasacadaysan ee xilliga jiilaalka, sida isugeynta, casiirada iyo diyaarinta kale, waxay la xiriiraan fasaxyada iyo xannaanada carruurta ee xannaanada. Iyo bokisyada, halkaas oo, marka laga reebo tufaax, waxaa jira miraha kale iyo nooca berry, noo keen in habeenkii jiilaalka qabow xasuusno of Orchard kareysa. Intaa waxaa dheer, tufaax goosashada waa mid aad u wanaagsan caafimaadka, taniyo xilliga qaboobaha waxaan badanaa helnaa fitamiino.
Sida loo koro noocyo tufaaxa Delicious ee beerta
Apple Tree Delight soo jiidataa bannaanka u sharaxaad kala duwan. Miraha ay soo jiidato qiyaasta waaweyn, dhinacyada gaduudan iyo waraabinta hodanka ah. Dhaqdhaqaaqa macaan ee quruxda leh ee qoraalada rasmiga ah iyo iftiinka iftiinka waa xiiso. Xitaa intaa ka badan sida qaangaarka hore ee geedaha tufaaxa, waxay iska caabinayaan cudur iyo dhaxan. Aynu isku dayno in aan fahanno faa'iidada iyo khasaarooyinka noocyada cusub ee macmacaanka, iyo sidoo kale falanqaynta sifooyinka geedka ee daryeelka.
Cuntooyinka ugu fiican ee tufaaxa goosashada jiilaalka
Meelaha Apple ee jiilaalka sida ku cad cuntooyinka la caddeeyey waxay noqon doonaan waxtar dheeraad ah ee cunto maalmeedka. Iyadoo ilaalinta tiknoolajiyada diyaarinta, alaabooyinkan ma aha oo kaliya ku faraxsan yihiin kuwa jecel tufaaxa leh dhadhanka cajiibka ah, laakiin sidoo kale waxay noqdaan ili dhab ah oo fiitamiin ah jirka. Ma taqaanaa? Dhamaan sawirada Ruushka Da'da ah, Beer Ceeden waxaa lagu beeray geedo tufaax ah.
Sida loo kariyo tufaaxa tufaaxa guriga
Waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo tufaaxa macaanka, samaynta baradhada shiidan iyo jelliyada, xiritaanka ama wax lagu daro sida buuxsamida keega, laakiin kuwani ma aha midka ugu macquulsan ee isticmaalka miro, sidaa darteed waxaad isku dayi kartaa inaad sameyso dhadhan caafimaad leh oo caafimaad leh sida meel kale. Nooca cabitaanka iyo sida loo sameeyo guriga - akhriso.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Apple 2019